Dream encwadini, uchaze kithi! Yini iphupho ... Zombies!
Abangane, ucabanga, yini uyaphupha Zombies? Ngiyaxolisa ngoba Pun, kodwa iphupho, ukuvusa uhamba efile (noma Zombies) ezimweni eziningi ukumela izinkinga okuqhubekayo! Vele uqaphele ukuthi poll wesabe zonke lezi amaphupho akudingekile - abaningi babo bangabantu abasizi zethu. Bayoba ingayala ukuthi benzeni esimweni esithile futhi ukutshela okuningi mayelana nathi, mayelana nezwe lethu elingaphakathi, nokunye. Cabanga ngezinye izibonelo ezibonisa ngamaphupho anjalo.
Kungani dream mayelana Zombies? dream Miller
Uma dream okhuluma naye isidumbu ophilayo, njengokuba nazi ukuthi wayesefile, uhlaziyo esiphuthumayo zokuphila kwakhe! Iqiniso liwukuthi enhliziyweni yakho yokushinga neyobubi bazinza endaweni yonke. Buka imicabango yakho. Thandaza, udinga ukusekelwa oPhezukonke.
Ngokuthakazelisayo, abahlala efile, okumenza ezihambayo emigwaqweni, ukuphila akunika imisindo incoherent futhi yingozi zonke izinto eziphilayo - impela iphupho omuhle! Ngokushesha uzothola ukuthi wake walahlekelwa.
Uma zombie ukhuluma kuwe kusukela lomngcwabo wakhe - alindele izenzakalo okungazelelwe kwenjabulo.
Uma ephusheni lakho uyazi ukuthi Zombies - kuyinto ngokwakho, ukuzicabangela. Iqiniso liwukuthi empeleni wena ngokomzwelo ixhumeke kumsindo nezwe elingaphandle. Awuboni zokucathula ahamba nawe.
Uzizwa ephusheni uma nidla abafileyo ophilayo? Yilokho ezinhle! Empeleni wena kabusha ngokomoya!
Kungani dream mayelana Zombies? Dream Ukuhunyushwa Tsvetkov
Bona ukuthi abafileyo nokuhamba kuthiwa kokuziklinya ngezinyembezi zabo? Abangane, bona kamunyu ukukhala ... Le kubhekwa uphawu ikusasa izinkinga zomkhaya. Zama ukuze umlomo wakho livaleke.
Uma dream uhamba buthule ngomgwaqo ngokungazelelwe uqaphela le undead evelayo ngifundise indlela yakho, + ngamunye ngamunye, yazini ukuthi sekuphelile esithile ekuphileni kwakho. Konke ubudala uya lwanyamalala, izitayela ezintsha ziyeza. Yini bayoba - kuphuma kuwe.
Umkhaya ncwadi iphupho. Kungani dream mayelana Zombies?
The Walking Dead e amaphupho ethu - iwuphawu ezingalindelekile, kodwa abadinga usizo.
Uma dream of a real zombie apocalypse - empeleni uya emuva kwezinye izimo ubudala, osekuyisikhathi eside sekulibalekile. Cabanga ngokuthi uyidinga!
Ngezinye izikhathi abaphilayo nabafileyo ukuza kithi ngamaphupho ukuvula le noma lolo lwazi namandla isiteshi enamandla. Ngokwesibonelo, nokulala ngokwengeziwe ekunikezeni impendulo yombuzo othi, ngubani Angekhe basivumele ukuphumula isikhathi eside.
Ngokwabo njengotshani zombie? Empeleni wena fixated esikhanyisela ngezinto ezithile inkani. Misa ukubukela futhi samoedstvom. Zama ukudambisa isimo ngokusebenzisa izingxoxo nabanye abantu. Hhayi yasifukamela kimi.
Dream Ukuhunyushwa Juno. Kungani dream mayelana Zombies?
Olufile amaphupho ethu - ke limane wamanje "izindaba." Yebo, abangane bami! Kuyinto kule ukubaluleka anelungelo encwadini iphupho. Met zombie - uthole igama elilodwa, sesibe isixuku esingaka olungenangqondo slobbering efile - ngeke awe phansi ithala izindaba zonke izinhlobo!
Kungani iphupho zombie ngokuvumelana Sonnikov Pelagia?
Uma ubona abafileyo nokuhamba - ningatatazeli. Ephusheni ungeyena ncamashi kuhlasela. Iqiniso ukuthi kukhona lapha ukukusiza ... usizo ukwazi ngokwakho! Wena uyazi noma iyiphi inkinga, konjane you nekhanda lakho empilweni yangempela. Izinguquko empilweni yakho baba kuzoba mnandi, ngoba zombies iphupho - akusiyo ebulalayo "umshini", abazingela ubuchopho bakho, futhi esinamandla sokuba yisiphi isinyathelo esiwujuqu kunanini ngaphambili.
Dream Ukuhunyushwa: baby girl - isimangaliso?
Dream Ukuhunyushwa: Bag - cazelo of phupha!
Dream Ukuhunyushwa: komlilo, umlilo futhi yini iphupho izakhi.
Phezulu encwadini iphupho. ingubo ebomvu - lokho kuyiphupho nje?
Kungani dream mayelana isinkwa - incazelo
Umshado ovulekile - uneminyaka emingaki? Lapho begubha umshado opal?
Cherry iplamu ujamu: a ukutholakala Culinary ngoba kophudingi
Peter Ivashchenko: Biography nemisebenzi
Umuthi 'Alezan "- ukhilimu for ukunwetshwa ngokuhlanganyela ekhona
Jobe umkhululi - ukuphila ukuzuzisa abanye
Opel Astra sedan. Igama elisha embonini yezimoto
Umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi - izimbangela ukuhlukumeza nokubuyiselwa kwalo